WOWOW 2 Handle Faucet Falopet Side Sprayer oil Rubbed Bronze
Home / Faucets kichin / Ikpokoro efere Faucets / WOWOW 2 Aka Kitchen Foset Na Side Sprayer Oil akwụkwọ ji agwụ Ọla
Ọdịdị ya siri ike ma sie ike na-ejide n'aka na Igwe Ọdụdọ adịghị nfe.
Ngwongwo pụrụ iche a na-eji ọla kọpa na ọla mee ka ọ bụrụ ihe na-eguzogide ọgwụ.
Abụ onye enyemaka dị mma ma dịkwa mkpa maka ndụ, isi nri kichin n'akụkụ nke ndị mmadụ na-eji ndụ ha kwa ụbọchị.
ihe anaghị arụ ọrụ, 304 igwe anaghị agba nchara na - arụ ọrụ na nnukwu ihe eji emejuputa mmanụ, ọla nke etere mmanụ na - egosipụta ike na ntachi obi n'ime fulawa kichin 23118A4RB
Uclọ erimeri kichin site na ịgba nwere ike ịtụgharị nhọrọ ogo ogo 360 iji nweta akụkụ ọ bụla nke ebe ịsa ahụ dị, 35-inch dị n'akụkụ akụkụ sprayer maka ihicha efere ma ọ bụ efere dị ọcha.
Uczọ eji esi eme klọọkụ nickel na-acha ọcha na-eji grips abụọ maka ịchịkwa ókè mmiri ọkụ na oyi na-atụ ga-esi rute. Igwe osisi crammic diski na-eme ka obi sie ike na ndụ niile na-arụ ọrụ nke ọma na ịrụ ọrụ ọsụsọ.
4-oghere 8 inch setups, nkwalite kwesịrị ekwesị na-eme ka ọ na-agbasa na granite counters ma ọ bụ mkpa ss sink.
SKU: 23118A4RB Categories: Faucets kichin, Ikpokoro efere Faucets Tags: Bronze Mmanụ, Akụkụ Sprayer
ọla nke etere manu